Baidu သည် BYD ၏ စမတ် မောင်းနှင်မှု လုပ်ငန်း ကိုထောက်ပံ့ မည် - Pandaily
Feb 25, 2022, 16:35ညနေ 2022/02/25 23:31:32 Pandaily
Star City နေ့စဉ်ရှန်ကျန်း အခြေစိုက် လျှပ်စစ် ကား ကုမ္ပဏီ BYD သည် Baidu အား စမတ် မောင်းနှင်မှု လုပ်ငန်း အတွက် တရားဝင် ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူ အဖြစ်ရွေးချယ် ခဲ့သည်ဟု သောကြာနေ့က သိရှိရသည်။ ဤ အစီအစဉ် အရ Baidu သည် BYD အား Apollo Navigation Pilot (ANP) နှင့် man-machine မြေပုံ ထုတ်ကုန် များဖြင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် မောင်းနှင်မှု အကူအညီ ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးလိမ့်မည်။ Baidu Intelligent Driving Group သည် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် BYD နှင့် စတင် ပူးပေါင်း ခဲ့ပြီး ဖက်စပ် မော်ဒယ် များ၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုကို မကြာမီ အကောင်အထည်ဖော် တော့ မည်ဖြစ်သည်။
BYD နှင့် Baidu အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့် ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် BYD သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကား ကုမ္ပဏီ များအတွက် ၎င်း၏ ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် ကို ဖွင့်လှစ် ရန် ကြေငြာ ခဲ့ပြီး မကြာမီ တွင် Vergia, Dongfeng Motor Group နှင့် Changan Automobile တို့နှင့် ထောက်ပံ့ရေး မိတ်ဖက် များ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကား ထုတ်လုပ်သူ သည်ကား ထုတ်လုပ်သူ အားလုံးအတွက် ထိုင်ခုံ များ၊ ပါဝါ ဘက်ထရီ များ၊ မော်တာ များ နှင့်လျှပ်စစ် ထိန်းချုပ် စက် များကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် BYD သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရှိ မော်တော်ကား ထုတ်လုပ် သူများအတွက် smart e-platform ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင် BYD Global Developers Conference တွင် BYD နှင့် Baidu တို့သည် ၎င်းတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုတွင် နောက်ဆုံး ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ လမ်းညွှန် နည်းပညာ အရ Baidu Map Car Edition သည် BYD မော်ဒယ် အားလုံးကို လွှမ်းခြုံ ရန်စီစဉ် ခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ မောင်းနှင်မှု အရ Baidu သည် BYD Level3စမတ် မောင်းနှင်မှု အတွက် ပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးလိမ့်မည်။ နှစ်ဖက်စလုံး သည် သုံးနှစ် အတွင်း အလိုအလျောက် မောင်းနှင် သောကား များကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ Baidu မှ BYD Qin Pro ၏ပထမဆုံး ပွင့်လင်းသော ဗားရှင်း ကို သရုပ်ပြ လမ်း စမ်းသပ် မှုအတွက် Apollo စမ်းသပ် ယာဉ် အဖြစ် ကြိုတင် ဘွတ် ကင် လုပ် ထားသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Baidu သည် Apollo Go Robotaxi ဝန်ဆောင်မှုကို ရှန်ကျန်း မြို့သို့ ယူဆောင် လာ သည်
Baidu သည် စမတ် မောင်းနှင်မှု နှင့် ကိုယ်ပိုင် မောင်းနှင်မှု တွင် အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။Baidu ကိုတည်ထောင် သူ၊ ဥက္က chairman ္ဌ နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Li Yanhongယခင်က ယာဉ် နှင့် လမ်း ညှိနှိုင်း ခြင်းဖြင့် ထောက်ပံ့ သော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ မောင်းနှင်မှု သည် Baidu လိုက်နာ ပြီး အကောင်းမြင် သည့် နည်းပညာ လမ်းကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း ယခင်က ထောက်ပြခဲ့သည်။ စမတ် ယာဉ် နှင့် လမ်း ညှိနှိုင်း ခြင်းအားဖြင့် အလိုအလျောက် မောင်းနှင်မှု မတော်တဆ မှုနှုန်းကို ၉၉% အထိလျှော့ချ နိုင်သည်ဟု ကုမ္ပဏီ ကပြောကြားခဲ့သည်။
BYD သည်တရုတ်နိုင်ငံ ၏အကြီးဆုံး စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူ များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ ၏စုစုပေါင်း ရောင်းအား သည် ၆ ၀၄, ၇ ၈၃ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂ ၁၈. ၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တွင်လည်း စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ ၏စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ် မှုမှာ ၆ ၀၇, ၁၁၉ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂ ၁၉. ၇၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Baidu Apollo Go Robotaxi ဝန်ဆောင်မှုကို တရုတ်နိုင်ငံ ရှန် စီ ပြည်နယ် မှာ စတင်
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန် စီ ပြည်နယ် Yangquan မြို့က ပြည်တွင်း နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်တဲ့ robotaxi တက္ကစီ ပလက်ဖောင်း ဖြစ်တဲ့ Apollo Go ကို အလိုအလျောက် မောင်းနှင် တဲ့ ဝန်ဆောင် မှုအတွက် ရှေ့ပြေး လိုင်စင် ထုတ်ပေးBaidu.